1. बेलनाकार गिफ्ट र्यापि another अर्को राम्रो डिजाइन हो जुन चाडपर्व वा विशेष दिनहरूमा व्यावहारिक हुन सक्छ किनभने वास्तवमा धेरै प्रकारका प्याकेजिंग बेलनाकार आकारमा डिजाइन गरिएको हुन्छ जस्तै कुकी बाकस, चकलेट बक्सहरू, इत्यादि। धेरै व्यक्तिहरूलाई यो लाग्न सक्छ कि सिलिन्डर उपहार रैपिंग विधि गाह्रो छ, तर वास्तवमा त्यस्तो छैन।
2. आपूर्ति गर्न तयारी - उपहार र्यापि paper पेपर - कैंची - पारदर्शी मास्किंग टेप - पातलो डबल-पक्षीय चिपकने - उपहार रिबन
3. र्यापि paper पेपर फैलाउनुहोस् र सिलिन्डर उपहार राख्नुहोस्। बक्स भित्र फिट हुन कागजको शीर्ष किनाराको उचाइ तुलना गर्नुहोस्।
4. तपाईंले मूल राख्नु भएको बक्सको आकारमा कागज काट्नुहोस्। कागजको लम्बाईमा किनाराहरू काटेर
5. जब तपाईंसँग लामो आयताकार उपहार र्‍याप हुन्छ, बेलनाकार उपहार बाकस ठाडो रूपमा रापि। कागजको बीचमा राख्नुहोस्। कागजको किनारा बिरूद्ध एक साइड रोल र्याप तयार गर्न।
6. कागजको छेउ र उपहार बक्सको बीच पारदर्शी टेपको साथ लपेटन सुरु गर्नुहोस्।
7. त्यसपछि उपहार बक्स ठाडो रूपमा बन्द गर्न कागजको अर्को छेउमा लपेट्नुहोस्। टेपलाई दृढतापूर्वक सुरक्षित गर्नुहोस् ताकि यो आउँदैन।
8. बक्सको माथिको सुन्दर पकड बनाउनको लागि पहिला कागजको मुनि फोल्ड गर्नुहोस्। जससँग इश्कबाजी गर्न गाह्रो छैन
9. कागजको कुनामा समात्नुहोस् जुन एक छेउमा टकराउँदछ, यसलाई बाकसको शीर्षमा तह गर्नुहोस् र पारदर्शी टेप संलग्न गर्नुहोस्।
10. एउटै दिशात पेपर रोल थिचेर र क्रिज समान साइज नभएसम्म थिच्दै कुनाहरू क्याप्चर गर्न सुरू गर्नुहोस्। जब times- times पटकसम्म जोड दिइन्छ, ढिलो रोक्नको लागि स्पष्ट चिपकने टेप प्रयोग गर्नुहोस्। सम्पूर्ण बक्स सम्म यो गर्न जारी राख्नुहोस्।
11. जब शीर्षसँग समाप्त हुन्छ, ठीक ठीक तल गर्न बाकस फ्लिप गर्नुहोस्। सुन्दरतापूर्वक तह गुनाउनुहोस्।
12. रिबनको आकारमा निर्भर गर्दै केही सेन्टीमिटर डबल-साइड एडेसिभ काट्नुहोस्। बोको पछाडि संलग्न त्यसोभए बो लाई ल्याउनुहोस् र बक्सको माथिको बीचमा राख्नुहोस् वा तपाईंलाई मनपर्ने केही अंश दिनुहोस्। त्यो हो।
13. कसरी एउटा सिलिन्डर उपहार बेर्ने भन्ने गाह्रो छैन। त्यो चाडको मौसम पनि नजिक छ, यदि तपाइँ प्रेम व्यक्त गर्न उपहार दिन चाहानुहुन्छ भने तपाईंको वरिपरि भएकाहरूको लागि हेरचाह गर्दै त्यसो भए यस प्रकारको उपहारलाई बेर्नु पर्छ त्यसो भए यसलाई सँगै प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्